Filtrer les éléments par date : samedi, 21 septembre 2019
Niondrika tamin’ny isa mavesatra 0 noho 6 i Madagasikara androany nanoloana an’i Botswana, tamin’ny lalao voalohany natrehiny tatsy amin’ny nosy Maorisy, amin’ny fiadiana ny tompondakan’ny faritra atsimon’i Afrika eo amin’ny baolika kitra, sokajy vehivavy latsaky ny 17 taona (COSAFA U17).
Nomontsanin’i Afrika Atsimo tamin’ny isa mavesatra 28 noho 0 kosa ny tovovavin’i Seychelles, izay samy lalao tao amin’ny vondrona B.
Lalao telo no tontosa androany sabotsy 21 septambra 2019, andro faharoa amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny taranja rugby, andiany faha-9 atao any Japon.
Nivoaka mpandresy tamin’ny isa 23 noho 21 i Frantsa nanoloana an’i Arzantina. 23 noho 13 no nandavoan’i Nouvelle-Zélande an’i Afrika Atsimo. Nibata fandresena 39 noho 21 ihany koa i Aostralia nanoloana an’i Fiji.
samedi, 21 septembre 2019 19:27
Midongy Atsimo: Rongony 7 kitapo saron'ny Zandary
Nandritra ny fisafoana nataon’ny Zandary avy ao amin'ny Tobim-paritra Midongy Atsimo tao Ambalahoraka, Fokontany Vohimanoro, Kaominina Nosifeno, Distrikan’i Midongy Atsimo ny alin'ny 18 septambra 2019 no sarona ny rongony milanja 71kg nitsinjara tamin’ny kitapo miisa 7.
Voasambotra ireo jiolahy miisa efatra nitondra ireo rongony ireo izay fantatra avy any Antodabe Isandra sy Befotaka Atsimo.
22 septambra ny Taom-baovao Malagasy iraisana izay ankalazaina eto Toamasina.
Tonga eto ny Lehibena andrimpanjakana, mpikambana amin’ny governemanta, solontenam-panjakana, Ampanjaka avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, Tangalamena, olontsotra, miaramila… mankalaza izany.
Misy tsangambato najoro ho marik'ity fiaraha-mankalaza ity taom-baovao Malagasy ity. Vato mirefy 7m, milanja 12 taonina nalaina tao Antananarivo izy io. Efa tafajoro ilay vato no tapaka tampoka, soa fa tsy nandratra olona.
Misy ny tsimandrimandry anio 21 septambra.
samedi, 21 septembre 2019 17:54
Morondava: Manjaka ny tsy fanarahan-dalana eo amin’ny sehatry ny fifamoivoizana
Misesy ny lozam-pifamoivoizana miseho eto an-drenivohitry ny faritra Menabe tato ho ato. Ny tsy fanarahan-dalana no antony, toy ny fiara mpitatitra olona nefa mitondra saribao, kamiao mampidina sy mampiakatra entana amin’ny ora sy toerana arak'izay tiany, mitondra moto manao taingin-telo na mihoatra, mitondra moto tsy manao aroloha … Vokany, betsaka ny lozam-pifamoivoizana.
Nanao fampahatsiahivana sy nanao fanentanana amin’ny fanarahan-dalàna ny Polisy ary dia handray fepetra manomboka amin’ny alatsinainy 23 septambra 2019.
samedi, 21 septembre 2019 17:40
Morondava: Voasambotra i Emmanuel, jiolahy mitam-piadiana
Teo ampanaovana ny asa ratsiny nandritra lanonampianakavian'olona tao Antsakoameloky mihitsy i Emmanuel, 30 taona, no tra-tehaky ny « Police Militaire » izay andia-miaramila manao fisafoana.
Nandratra olona ity jiolahy ity tamin’io fanafihany io. Efa natolotra ny Zandary eto Morondava, renivohitry ny faritra Menabe izy, izay hanao ny famotorana. Karohina ny namany.
Efa nokarohina fotoana ela ity Emmanuel ity, noho izy fantatra ihany koa fa mpampiantrano mpangalatra.
samedi, 21 septembre 2019 16:51
Tovovavy tsy misy tanana: Sady Afaka BEPC no tafiditra amin’ny lisea teknika i Voaja
Avy agny Amparihikambana - Tsiroanomandidy i Voaja na Randriamaherizo VOAJANAHARY Léonor, fa izay no anarany feno. Manan-kilema i Voaja satria tsy nisy tanana hatrany am-bohoka.
Iray amin’ireo ankizy 82 karakarain’ny ONG FAMI ao amin’ny Foyer “Bon Remède” Amparihikambana i Voaja.
Afa-panadinana BEPC farany teo izy, ary tafita soamantsara ihany koa tamin’ny fifaninana hidirana taona voalohany ao amin’ny « Lycée Technique et professionnel » 2019.
samedi, 21 septembre 2019 16:50
BEPC Toamasina I: 28,61% ny taham-pahafahana tamin’ity 2019 ity
Nivaly omaly ny voka-panadinana BEPC ho an’ny Fari-piadidiam-pampianarana Toamasina I. Nihena ny taham-pahafahana ; 28,61% izany tamin’ity 2019 ity raha toa ka 40% tamin’ny taon-dasa 2018.
17,77/20 ny naoty farany ambony azon'ny mpiadina tamin’ity izay mpianatry ny CEG Référence.
samedi, 21 septembre 2019 13:45
Antsiranana: Lanonana fametrahana samboadin’ny solombavam-bahoaka
Notanterahina teo amin’ny Place Ritz eto Antsiranana androany 21 septrambra 2019 ny lanonana fametrahana ny samboadin’ireo solombavam-bahoaka voafidy tato amin’ny Faritra DIANA.
Miisa enina mianadahy izy ireo no nametrahana samboady maha olom-boafidy, dia ireo roa voafidy teto Antsiranana I, sy iray avy voafidy tao Antsiranana II, Ambilobe, Ambanja ary Nosy-Be.